ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘာကြောင့် ဦးနေ၀င်းကို ပါးရိုက်ဆုံးမခဲ့တာလဲ ? – Lily Par
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘာကြောင့် ဦးနေ၀င်းကို ပါးရိုက်ဆုံးမခဲ့တာလဲ ?
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်နေဝင်းက သမ္မတမန်းဝင်းမောင်ကို ကော်လာကဆောင့်ဆွဲတယ် ဒုဝန်ကြီးချုပ်ဦးကျော်ငြိမ်းကို ခင်ဗျားတို့ စောက်အစိုးရကို ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပြောခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပြီး တပ်မတော်ကအငြိမ်းစားတယောက် ဘယ်သူမှမကြားဘူးတဲ့ သမိုင်းသစ်တွေ ပြောနေတယ်ကြားတယ်ဗျ။ အဲတော့ ကျနော် ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတာလေးတွေ နားထောင်ဖူးတာတွေ ပြန်မျှပါရစေဗျာ။
ဂျပန်ကို ရဲဘော်သုံးကျိတ်ဘဝနဲ့ မသွားခင် စာတိုက်စာရေး ကိုရှုမောင် ဘဝကတည်းက မိန်းမမှုပွေတာ လောင်းကစားလုပ်တာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ တချို့က ပိုက်ဆံအမြဲပြတ်နေလို့ ပုလိပ်သတင်းပေးလည်း လုပ်ဖူးတယ်ဆိုစမှတ်ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး နှစ်ဂိုဏ်းကွဲစဉ် သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအုပ်စုမဟုတ်တဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်လို့ သိကြတဲ့ ဗစိန် ထွန်းအုပ်ဂိုဏ်းမှာ နေရာတခုရအောင်ယူပါတယ်။ ကြောင်လက်သည်းဝှက် ရှုမောင်ကို ရဲဘော်သုံးကျိတ်စီစဉ်ချိန်မှာ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ သဘောထားကြီးမှုနဲ့ သွေးမကွဲလိုလို့ ဗစိန်ထွန်းအုပ်ဂိုဏ်းကလူတချို့ခေါ်ရာမှာ ထည့်သွင်းစေလွှတ်ခံရပါတယ်။ ဗစိန်ထွန်းအုပ်ဂိုဏ်းက လူတွေ ဗမာ့နိုင်ငံရေးမှာ အမြဲရှုပ်ခဲ့ပုံလဲ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဂျပန်အဝင် အင်္ဂလိပ်အဆုတ် မြေအောက်တော်လှန်ရေးစီမံဖို့ ကြိုလွှတ်ပေမဲ့ ရန်ကုန်ဖာတန်းက မနည်းဆွဲထုတ်ရလို့ ဗိုလ်ချုပ်က ပြင်းစွာသတိပေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ နောက်တခါ ရန်ကုန်ကို ဗိုလ်မီူးကြီးနေဝင်းဦးဆောင်တဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်က သိမ်းလိုက်ပြီလို့ ကျေငြာချက်ထုတ်ပြီး သူဘဲ လုပ်သလို နာမည်ယူလို့ သတိပေးခံရပါသေးသတဲ့။
ဂျပန်ခေတ်မှာ ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ ရာထူးဟာ လောင်းကစား မိန်းမ လိုက်စားမှုစတဲ့ စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကြောင့် ရာထူးချခံရဖူးပါတယ်။ ဂျပန်ခေတ်တော်လှန်ရေး အတွေ့အကြုံ စာအုပ်တွေ အတ္ထုပတ္တိတွေမှာ ဗိုလ်နေဝင်း နာမည်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါ။ သတင်းပေး လုပ်ဖူးတာ မိန်းမမှုပြဿနာ မြင်းလောင်းတာတွေနဲ့ ထွေးလုံးနေလို့ လျှို့ဝှက်ကိစ္စတွေမှာ ဘေးဖယ်ထားခံရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ မိန်းမကောင်းတယောက်အပေါ် ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ မဟားဒယားကြံစည်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါးရိုက်ဆုံးမခဲ့တယ်။ မျက်ရည်လည်ရွဲ ကြက်ကြီးလည်လိမ်ရုပ်နဲ့ ငုတ်တုတ်ငြိမ်ခံခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်နေဝင်းဟာ ပြစ်ချက်မျိုးစုံ ရှိပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခေါ်ဆူတိုင်း ခြေသလုံးဖက်မတတ်တောင်းပန်တိုးလျှိုးတတ်တာရယ် လူရိုးလူအကြီးလို ဟန်ဆောင်တာရယ်ကြောင့် သက်ညှာထောက်ထားခဲ့တယ် အပြီးမထုတ်ပယ်ခဲ့တာလို့ ထင်ကြေးပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အပေါ် အမျက်သိုခဲ့ပြီး လုပ်ကြံခံရမှုမှာ သံသယတွေ သဲလွန်စတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ သူဟာနေရာတခု ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ မဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
လွတ်လပ်ရေးရအပြီး ဦးနုအစိုးရခေတ်မှာလည်း လင်ရှိမယား ဒေါ်ခင်မေသန်းကို ယူတဲ့ပြစ်မှုနဲ့ ဦးနုက လူမှုရေးစည်းဖောက်မှုနဲ့ ထုတ်ပယ်ဖို့ စီစဉ်ပါသေးတယ်။ သူမွေးထားတဲ့ ဆရာ ဦးကျော်ငြိမ်း ဦးဗဆွေကတဆင့် ရှိခိုးတောင်းပန်တယ်။ နောက်သူတို့ပါ ဖြုတ်ထုတ်အကျဉ်းချခံရမှာ မမှန်းဆနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆွေငြိမ်းအုပ်စုကြောင့် ရာထူးမြဲခဲ့ပြန်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဖြူဖြူစင်စင်နိုင်ငံရေးသမားဘဝကလာခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရော ဦးနုပါ ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ ဒူးတုတ်ရှိခိုး မျက်ရည်လည်ရွဲ လှည့်ကွက်ကို လူရိုးသားတွေမို့ နားမလည်ဘဲ ဗမာပြည်ကံဆိုးခဲ့ရပါတယ်။
အချုပ်ပြောရရင် ရှုမောင်ခေါ် ဗိုလ်နေဝင်းဟာ အာဏာရှင်မဖြစ်ခင် ကာလတလျှောက်လုံး အထက်လူကြီးတွေကို နင်ဘဲငဆ ပြောဖို့ အင်္ကျီဆောင့်ဆွဲဖို့ အသာထား လုပ်ချင်လုပ် ထင်ရာစိုင်းပြီးရင် မျက်ရည်လည်ရွဲ ဒူးတုတ်တောင်းပန်သူပါ။ ကပ်ဖားရပ်ဖား ဆရာမွေးပြီး တက်လမ်းရှာသူပါ။ အင်မတန် ထက်တယ် လည်တယ်ဆိုတဲ့ ဦးကျော်ငြိမ်းလို လူတောင် တပတ်ရိုက် ဆရာမွေးပြီး နောက်ဆုံးမှ အကျဉ်းချခဲ့သူပါ။ ဦးဗဆွေကတော့ ထောင်ထဲရောက်နေချိန်တောင် သူ့လူဗိုလ်နေဝင်းက တိုင်းပြည်အပေါ်တော့ စေတနာရှိတယ် ယုံခဲ့သူပါ။ ဘယ်လောက် ကြောင်လက်သည်းဝှက် ရှေ့တမျိုးကွယ်ရာတမျိုးလုပ်တတ်သလဲဆို ဦးနုကတော် ဒေါ်မြရီဟာ အာဏာသိမ်းခံရတဲ့ညက မောင်နေဝင်းလေးရော အန္တရာယ်ကင်းရဲ့လားမသိဘူးဆိုပြီး စိုးရိမ်နေခဲ့ပါသတဲ့။ အာဏာရပြီးချိန် သောင်းကျန်းပုံတွေကတော့ ကြားဖူးကြမှာပါ။ အခုတော့ ဗိုလ်နေဝင်းဟာ မဟုတ်မခံ မှန်မှန်လုပ်တတ်တဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လို ပုံဖော်တာကို အမှန်သိစေချင်လို့ မှတ်မိသလောက် ပြန်ချရေးလိုက်ပါတယ်။
အချက်အလက်တွေကို ကြေးမုံဦးသောင်းရဲ့ စာအုပ်များ ထောက်လှမ်းရေးဒုညွှန်ချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်ဆွေရဲ့ စာအုပ်၊ ဦးအောင်ခင်ရဲ့ အောင်ဆန်းကိုဘယ်သူသတ်သလဲ စာအုပ် နောက်ပြီး မိုးမခစာအုပ်စင် စာမျက်နှာ စာရေးသူတွေဆီမှာ ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတာတွေက ကိုးကားတာပါ။ နောက်ပြီး ငယ်ငယ်က နိုင်ငံရေးအတိတ်တွေ ပြောပြတဲ့ ဖေဖေနဲ့ သူ့မိတ်ဆွေတွေ ပြောတာတွေ နားထောင်ခဲ့တာတွေလည်း ပါပါတယ်။
ဓာတ်ပုံမှာ တာဝန်ချိန်တွင် စစ်ရုံးတွင် မရှိပဲ ရန်ကုန်မြင်းပြိုင်ကွင်းသို့ သွားကာ မြင်းစီးသမား ဂျော်ကီ နာမည်ကြည့်ပြီး လောင်းလေ့ရှိသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းကို သတင်းစာဆရာ ဦးအုန်းခင် သွားရောက် အင်တာဗျူးနေသည် ပုံ ဖြစ်သည်။ ဆိုင်းဘုတ်တွင် မြင်းစီးသမားများ၏ အမည်ကို တွေ့ရမည်။
Copy : Nay Zaw Myo Win
Khualum lai ah chuan hmeichhia an inhlahdah